Barattoonnifi qonnaan bultoonni Haroomaayaa dhibbaatamaan lakkaayaman mana hidhaa Addeellee fii Hammarreessaatti guuramaa jiru -
Barattoonnifi qonnaan bultoonni Haroomaayaa dhibbaatamaan lakkaayaman mana hidhaa Addeellee fii Hammarreessaatti guuramaa jiru
‪#‎OromoProtests‬ ALERT Haromaya: Hundreds of students and farmers are being taken to Adele Military camp. Remember Adele and Hamaressa military camps were used by the previous regime for committing mass killing and mass grave was discovered two years ago.
Barattoonnifi qonnaan bultoonni dhibbaatamaan lakkaayaman Haramaayaa irraa guuramuun gara kaampii Waraanaa Addeellee geeffamanii jiru. Kaampileen waraanaa Addeelleefi Hammarreeysaa kan mootummaan Darguu ummata Oromoo jumlaan itti fixaa ture ta’uun ni yaadatama.
Previous Maal nuuf Wayyaa?
Next Reeffi baqattoota lammiilee Itoophiyaa 122 ta’u naannoo galaana diimaa (Sanag) tti argamuu isaa (Horse media) gabaaseera.